2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhageyso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiysiyada.
Axmad	 Dec 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 06-05-1441 …
War Saxaafadeed Rasmi ah: Weerarkii Ex-Control Afgooye ee Muqdisho.
Xafiiska Warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa soo saaray warsaxaafadeed lagu faahfaahiyay khasaarihii ka dhashay weerarkii Ex Contarol Afgooye. Warsaxaafadeedka oo ku soo baxay luqadaha Carabiga iyo Engiriisiga…
Dhegeyso Ehelada Ganacsada Maraykanku dilay iyo dad uu geel ka laayay.
Ehelada Ganacsade Kuusow Xaajji Maxamed Yuusuf oo Dowladda maraykanku dorraad galab dishay duleedka deegaanka kuunyo barrow ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa muujiayay sida ay ugu…
Dhaegsyo Warka Duhurnimo Ee Radio Al-furqaan.
cusmaan	 Dec 31, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa isniin Taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Al Shabaab oo War Kasoo Saartay Qaraxii Ex.control Afgooye Tacsina Udirtay Shacabkii Ku Dhintay…
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) ayaa ka hadlay qarixii dhawaan ka dhacay Ex Contarol Afgooye, kaasoo uu khasaare kasoo gaaray ajaanib iyo dad shacab ah oo goobta ka ag dhawaa.…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 05-05-1441 …
Daawo Sawirro: Mareykanka oo Duqeyn Uu Ka Geystay Sh/Hoose Ku Dilay Ganacsade Caan Ah & Geel…
Axmad	 Dec 30, 2019 1
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa duqeymo arxan darro ah oo ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen gobolka Shabeelaha Hoose, shalay casar-liiqii iyo xalay fiidkiiba. Dueymahan oo ka dhacay degaanka Kuunyo Barrow oo hoos taga degmada…
Axmad	 Dec 30, 2019 2
Axmad	 Dec 30, 2019 0